Ryan Giggs oo shaaca ka qaaday xiddigii ugu fiicnaa uu la saaxiibay xirfadiisa kubadda cagta – Gool FM
Dajiye May 24, 2020
(Manchester) 24 Maajo 2020. Xiddigii hore kooxda Manchester United ee Ryan Giggs ayaa shaaca ka qaaday laacibkii ugu fiicnaa uu la saaxiibay xirfadiisa kubadda cagta, wuxuuna tilmaamay inuu yahay Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ayaa Manchester United kaga soo biiray 2003-kii kooxda Sporting Lisbon, wuxuuna ku qaatay garoonka Old Trafford, muddo 6 sano ah kahor inta uusan u dhaqaaqin kooxda Real Madrid.
Laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa mudadii uu ku sugnaa kooxda Manchester United, wuxuu kula guuleystay horyaalka Premier League oo saddex jeer ah, Champions League hal jeer, iyo FA Cup oo hal jeer ah.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Ryan Giggs, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ronaldo wuxuu ku fiicnaa England, wuxuuna sii waday inuu ku soo bandhigo qaab ciyaareed fiican meel kasta oo kale”.
“Maskax ahaan wuu ka dhaqso badan yahay qof kasta, markii aad u malaynaysid inaad kubadda isaga ka qaadday, wuu qarinaayaa” ayuu yiri Ryan Giggs.